I-trailer Ekugcineni Ivela Ku-Green Inferno
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo I-trailer Ekugcineni Ivela Ku-Green Inferno
by admin April 16, 2014 836 ukubukwa
Sekuyisikhathi eside ukuthi sibe nokuthile esingakubika maqondana nakho IGreen Inferno, I-ode yothando ka-Eli Roth kumafilimu afana UkuQothulwa KwaseCannibal. Ekupheleni komsila wonyaka odlule sifunde ukuthi ama-Open Road Films azonikeza ithuba lokukhishwa kwaseshashalazini ngoSepthemba 5 walonyaka, yize ngaleso sikhathi sasingakayiboni i-trailer noma zonke lezo zithombe kusukela ekubuyeni kukaRoth okulindelwe isikhathi eside esihlalweni somqondisi.
Sathembisa ukukugcina sikuthumela noma nini lapho sizwa okuningi futhi namuhla senza kahle kuleso sithembiso. I-trailer ye IGreen Inferno ekugcineni isiphumile ehlathini eligcwele amazimuzimu, futhi silapha namuhla ukukuphakela ngoqwembe lwesiliva. Futhi, ingabe kunambitheka kahle.
Chofoza inkinobho yokudlala engezansi ukucwilisa amazinyo akho ekubukeni kokuqala kwelinye lamafilimu e-horror alindelwe kakhulu ka-2014, eza kithi ngezilokotho ze- I-Moviefone!
In IGreen Inferno, ibhalwe ngokubambisana futhi iqondiswa ngu-Eli Roth, iqembu lezishoshovu zabafundi elihambela e-Amazon ngomzamo wokusindisa isizwe ekuqothulweni. Lolu hambo luthatha ithuba okwesabisayo lapho bebona ukuthi bazama ukuvikela isizwe samazimuzimu… futhi sebezoba inkambo ephambili.
Njengomlandeli omkhulu wamafilimu wangaphambilini kaRoth, ngililangazelela kakhulu leli, okufanele libe ngumoya omusha, phakathi kwawo wonke ama-horror-themed themal abelokhu egcwala ebhokisini eminyakeni eyedlule. Ubukhazikhazi bukaRoth obugulisayo, obusontekile nobwesabekayo bungaba yikho nje ukudutshulwa engalweni uhlobo oludingayo, futhi angisakwazi ukulinda ukuzitika ngamehlo ami ezinsongweni ezilindelekile.
Uthini wena ?!